Bazoqeqeshwa ngezamabhizinisi abakhubazekile | News24
Bazoqeqeshwa ngezamabhizinisi abakhubazekile
ISITHOMBE:SITHUNYELWE UMnu Khuleka Khumalo amukela ingubo yokulala kwabaka Gift of the Givers Foundation.
ABAKHUBAZEKILE abaqhamuka ngaphansi komasipala abayisikhombisa esifundeni saseMgungundlovu bakhuthazwe ukuba bavuke bazithathe njengoba sebezofundiswa nangendlela yokuzisungulela amabhizinisi.
Lokhu kuvele emcimbini wokuthula ngokusemthethweni uphiko lwabakhubazekile ngaphansi koMnyango wezokuVakasha nokuThuthukiswa koMnotho eKZN Museum ngeledlule.
Usihlalo wenhlangano eyaziwa ngeDisability Special Organisation eMgungundlovu uMnu Mduduzi Jijane uthe phambilini bekuthi uma kukhulunywa ngezinhlelo zokuthuthukisa abakhubazekile, kubhekwe abesifazane nentsha, okuzothi ngalolu phiko olusha kusizakale bonke abakhubazekile.
Uthe ngokocwaningo olwenziwe kutholakale ukuthi abantu abakhubazekile basasalele emuva kakhulu ezintweni ezibandakanya intuthuko, ngenxa yokuthi bancishwe ulwazi. Uveze ukuthi lolu phiko luzosiza ukuthi bazisungulele imifelandawonye (co-operatives), nokuzisungulela amabhizinisi athinta bona ukuze bakwazi ukuxosha indlala.
Ekhuluma naleli phephandaba uthe: “Kunabantu abakhubazekile abanamakhono ayisimanga ekwenzeni imisebenzi yezandla, ezobuciko nakwezolimo.
“Lolu phiko lizosiza ukuba bahlanganise imifelendawonye ezongenisa umali.
“Bazophinde futhi bafundiswe nangolwazi lokusebenzisa nokonga imali.”
UJijane uthe ngaphandle kokubacijisa ngolwazi lokuzisungulela amabhizinisi, kuzophinde kube nomkhakhaso obizwa nge ‘Back to school’.
“Phakathi kwethu kunabantu abanamakhono kodwa ngenxa yokuthi imfundo abazange bayithole, bagcina bephelele lapho namakhono abo. Kuzoba nohlelo lokubaxhumanisa nezikhungo zemfundo ephakeme, amakolishi okuqeqeshela amakhono (TVET Colleges) nemfundo yabadala.
Lokhu kuzolekelela ukuthi kungabi khona othi uncishwe ithuba le mfundo,” kusho yena.
Phezu kwalokho inhlangano ebhekelele nokusiza imiphakathi iGift of the Givers Foundation izosiza ngokunikelela ngokudla nezingubo